अचम्म ! चारखुट्टे कुखुरा भेटियो… « गोर्खाली खबर डटकम
अचम्म ! चारखुट्टे कुखुरा भेटियो…
चरा चुरुंगीका दुइ खुट्टा हुन्छन् । तर भारतमा भने एउटा चारखुट्टे कुखुरा भेटिएको छ ।उत्तर प्रदेशको हापुडस्थित कुखुराको मासु पाइने एउटा पसल आजकल निकै चर्चामा छ । यो मामुली पसलले यति धेरै चर्चा पाउनुको एक मात्र कारण हो दिल्ली मण्डीबाट त्यहाँ ल्याइएको एउटा चारखुट्टे कुखुरा ।
दुनियामै कहीँ नभएको चार खुट्टे कुखुरा फेला परेपछि त्यहाँ ठूलै हंगामा नै भएको छ । उक्त कुखुरा निकै कौतुहलताको विषय बनेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।उक्त पसलमा कुखुराको मासु किन्न आएका मानिसहरु उक्त जिउँदो कुखुरालाई हेरेर कसैले त्यसलाई भगवानको रुप भन्दछन् भने कतिपयले त्यसलाई चमत्कार भन्दछन् ।
कतिपयले त यो चमत्कारी कुखुरा किन्नका लागि महंगो मूल्य तिर्न समेत तयार भैसकेका छन् । एक जना व्यक्तिले उक्त कुखुरा ४ हजार भारुमा आफुले किन्ने प्रस्ताव गरे । तर पसलका मालिक मोहम्मद कासिम तथा मोहसिनले उक्त अनौठो कुखुरा बेच्न अस्विकार गरेका छन्
झारफुक गर्ने मन्दिरका पुजारीले महिलाहरूको भूत हटाउनका लागि अनेकौं क्रूरता देखाउने गरेका छन् ।
महिलाहरूलाई टाउकोमा जुत्ता राखेर तातो घाममा लामो दूरी हिँड्न लगाइन्छ । जुत्ता पनि एकदम घिनलाग्दो हुने गर्छ । अझ महिलाहरू यस्तो फोहरी जुत्ता मुखले च्यापेर ल्याउँछन् अनि मन्दिरमा आएर त्यसबाटै पानी उबाएर पिउँछन् । जुन महिलालाई भूतप्रेतको धेरै समस्या हुन्छ, उसलाई झन् बढी यातना दिने गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा अहिले धर्म परिवर्तन एक सामान्य विषय भएको छ । लोभ र लालचमा लागेर धर्म परिवर्तन गर्ने र गराउनेहरु सक्रिय भएर लागेका छन् । सनातन धर्मको रक्षा गर्नका लागि पनि धेरै व्यक्तिहरु अगाडि आएका छन् । यस्तै जय मा महाकाली माता पनि धर्म परिवर्तनले धेरै अप्ठ्यारोमा पारेको बताउँनुहुन्छ ।
प्रकाश सपुतलाई चेतावनी दिनेहरुलाई दिपकराज गिरीको कडा जवाफ